Iipaneli zeTwitch: yintoni na, iimpawu kunye nokuba zifumaneka phi | Abadali be-Intanethi
UNerea Morcillo | 13/05/2022 16:00 | ngokubanzi, Tutorials
Umthombo: Caracol Radio
Ngokufika kweeapps ezinje ngeTwitch, amathuba okuyila kunye nokudala aye anda. Kuba sesinye sezona zicelo zikhulu zokusasaza kwiplanethi yethu, asinakukwazi ukukhuphela ngaphandle amathuba amakhulu okwenza kunye nokuyila iprofayile yethu, ngendlela enomtsalane kangangoko kunokwenzeka.
Yiyo loo nto namhlanje sikuzisela esinye sezithuba apho uTwitch eba ngumlinganiswa oyintloko. Ingakumbi makhe sithethe ngeepaneli zeTwitch, yeyiphi imisebenzi yayo ephambili, kwaye ngaphezu kwayo yonke into esinokuyenza ngayo kunye nendlela yokukhuphela okanye ukuyifaka ngokuthe ngqo.
Konke oku kunye nokunye okuninzi.
1 Iiphaneli zeTwitch: yintoni na kunye neempawu ezisisiseko
2 Uyenza njani kwaye uyikhuphele njani
2.1 Indlela yokuyidala
2.2 apho uzikhuphela khona
2.3 Ubongeza njani xa sele uyilelwe
3 Iintlobo zeetemplates zedeshibhodi
3.1 Malunga nam iitemplates
3.2 iitemplates zomnikelo
Iiphaneli zeTwitch: yintoni na kunye neempawu ezisisiseko
Kakhulu, kufuneka sazi ukuba zeziphi ezi ntlobo zeefomati ze-intanethi esiza kuziyila. Kuba aziyilwanga kuphela njengendlela yobuhle, kodwa zinemisebenzi eyahlukeneyo.
Twitch panelse chaza njengendlela okanye uhlobo lwejelo lolwazi apho unokubonelela ngejelo lakho njengomsebenzisi, uluhlu lwezikhokelo zolwazi malunga nawe kunye nento oyiprojekthayo kwabanye. Oko kukuthi, xa abanye abasebenzisi befaka ijelo lakho ukuze balijonge, baya kukwazi ukubona ezi panels zolwazi.
Ezi phaneli zihlala ziqulethe ulwazi lwazo zonke iintlobo, ezinje: ulwazi malunga nebhayografi yakho apho uthetha khona malunga nokuba ungubani, wenza ntoni kwaye uluhlobo luni lweprojekthi oyenzayo. Abanye abakuthumela ngokuthe ngqo kwiprofayile yezinye iinethiwekhi zentlalo, kunye nabanye abathi endaweni yoko babonise ulwazi malunga nexesha loqhagamshelo lwakho, njengohlobo lweshedyuli yeendaba.
Nganye kwezi panel yayiyilwe ngenjongo yokunciphisa ulwazi oluphangaleleyo lube yinto emfutshane kakhulu kwaye ukubetha, umba othanda kakhulu esi sicelo, esithe saba sefashonini.
iibhodi zolwazi, Ngokuqhelekileyo zincinci ngobukhulu., oko kukuthi, bahlala benemilinganiselo apho kuphela ulwazi olufanelekileyo luchazwe. Kwanele ukutsala ingqalelo yabanye abasebenzisi.
Nganye kwezi panel zimelwe kumbala owahlukileyo ukuze zihluke kumxholo wolwazi. Umzekelo, ukuba uyila iiphaneli ezimbini okanye ngaphezulu apho uthetha ngebhayografi yakho, kufuneka uwahlule kwezinye usebenzisa umbala omele ulwazi oluthethiweyo. Ngale ndlela, uya kuqinisekisa ukuba uluntu olukubonayo aluphosi kwanto ngawe kunye nento oyenzayo.
Ezi phaneli ziyilwe okanye zenziwe, ngoko inkqubo iyafuneka ukuze ukwazi ukuyila kwaye ibonakale kwiqonga lakho okanye iprofayile. Kodwa ungakhathazeki, kuba siye sayila isifundo esifutshane apho siya kucacisa yonke into ngokweenkcukacha ngakumbi, ukuze ungaphoswa yiyo nantoni na elandelayo.
Iiphaneli zihlala ziqulethe itekisi eninzi, kunokuba uyilo. Ngoko kufuneka zibe lula kangangoko kunokwenzeka. Oko kukuthi, ulwazi olukuzo loyisa ngaphezu kwezinto zegraphic ozisebenzisayo. Inkcukacha ekufuneka uyikhumbule.
Uyenza njani kwaye uyikhuphele njani
Ukuba sithetha ngokudala, Sinokuthi iiphaneli zeTwitch zinokudalwa kumaphepha ahlukeneyo ewebhu okanye izixhobo eziluncedo kuthi.. Ukongeza, sinazo zonke izixhobo ezifunekayo ukuze sizidale.
Ngokomzekelo, sifumana iiwebhusayithi ezifana neCanva, ezinikezela ngenkonzo yamahhala kunye namawaka kunye namawaka eetemplates zokukhuphela kunye nokuyila. Ukongeza, ayizukuba yingxaki kuwe kuba uninzi lwezi templates sele ziyilwe njengomgangatho. Ke ngoko, kuya kufuneka uqwalasele kuphela imibala kunye neefonti ngokuthanda kwakho.
Nje ukuba ube neetemplates eziyilelweyo, kuya kufuneka uyikhuphele kuphela, ngoko ke ukukhuphela kusimahla, ngaphandle kokuba ukhetha ngomgangatho ophezulu kakhulu kunowona uqhelekileyo abakunika wona. Sikwafumana amaphepha anje nge-Placeit apho unokuthi uyila ngokuthanda kwakho ngendlela ekhuselekileyo nesimahla.
Ukuba, ngokuchaseneyo, ukhetha ukukhetha ezinye iindlela zokuhlawula, Ungarhuma kwilayisenisi ye-Adobe, nakwizicelo ezifana ne-Illustrator okanye iPhotoshop, uya kukwazi ukuyila uyilo lwakho ukusuka ekuqaleni ngendlela yobuchwephesha. Kwakhona, unovavanyo lweentsuku ezi-7 zokuluzama.
apho uzikhuphela khona
Umthombo: Kufuneka okanye Die
Kwimeko yokucinga ukuba sifuna ukuyikhuphela ngokuthe ngqo, ngaphandle kwesidingo sokuyila, sinokukhetha amakhulu amaphepha ewebhu asele eyilwe njengomgangatho kwaye kufuneka sicofe kuphela iqhosha lokukhuphela.
Sifumana amaphepha afana neFreepik. Lelona phepha lifunwayo emva kwevektha kunye nemockup yazo zonke ezikhoyo. Kuyo, sinokuhamba kujongano lwayo olubanzi apho sivela kwimifanekiso enesisombululo esihle, ukuya kwii-mockups kwifomathi ye-PSD apho sinokukhuphela iphaneli kwaye siyiguqule ukuba sinqwenela. Sisixhobo esiluncedo kakhulu.
Ukuba ukhangela i-intanethi, uya kufumana ithuba elibanzi lolu hlobo lweepaneli kunye noyilo olufunyenwe zombini simahla kunye neendleko ezithile zenyanga okanye zonyaka. Unokufumana kwakhona amanye amaphepha ewebhu, apho ufumana iiseti ezahlukeneyo ezinoyilo olwahlukileyo lwephaneli ngoko ungakhetha eyona oyithanda kakhulu kwaye ungayikhuphela.
Okanye endaweni yoko, kukho amanye amaphepha ewebhu, anethala leencwadi elibanzi leephaneli, kwaye nje ngokukhangela umbala owufunayo okanye uyilo, akubonisa wona. Ukukhuphela olu hlobo lweepaneli ngumsebenzi olula kakhulu kwaye olula, kunye neendleko ezincinci.
Ubongeza njani xa sele uyilelwe
Ukuba sele sinephaneli yethu eyilelwe kwaye sifuna ukuyongeza eqongeni, konke okufuneka ukwenze kukulandela la manyathelo:
Into yokuqala esiya kuyenza kukuvula isicelo kwaye singene nge-imeyile kunye negama lokugqitha.
Nje ukuba singene ngaphakathi, kufuneka siye kwi icon eboniswe kwiprofayile yethu, Ekunene kwale ndlela, imenyu encinci iya kuboniswa kunye nolunye ukhetho.
Nje ukuba imenyu ibonisiwe, kufuneka sikhethe ukhetho oluboniswe njengetshaneli kwaye xa sicofa, emva koko, sijonge ukhetho Malunga.
Siza kucofa kwakhona kwaye ukhetho luya kuvela Hlela iideshibhodi, kulapho siya kufikelela khona.
Xa singaphakathi siza kukhangela i icon ye + kwiqela lenjongo kwaye ke iinketho ezimbini ziya kuvela, yintoni thinaSiya kuvuma ukucofa kukhetho lokuqala.
Nje ukuba sifikelele, uhlobo lwefestile luya kuvula kwakhona apho kuya kufuneka sigcwalise idatha malunga noyilo lwethu, ezifana: isihloko, umfanekiso, amanye amakhonkco kunye nenkcazelo emfutshane.
Nje ukuba siyigcwalise ifom kwiphaneli, Kufuneka sicofe nje iqhosha thumela kwaye silungile.
Iintlobo zeetemplates zedeshibhodi
Sifumana iintlobo ezahlukeneyo zeetemplates, kuxhomekeke kuhlobo lolwazi esifuna ukukunika lona. Kule nto, siza kukubonisa iintlobo ezimbini okanye ezintathu zeetemplates ukuze ufumane uncedo kuyilo lwakho. Ngokukodwa ukuba awukazi ukuba luhlobo luni lolwazi onokunika abaphulaphuli bakho.
Malunga nam iitemplates
Malunga nam iitemplates luhlobo lweetemplates ezenzelwe ukuthetha ngawe, umzekelo zilungile kakhulu ukuba zimalunga ne-biography yakho. Ngokuqhelekileyo banemibala eqaqambileyo kwaye bayilwe ngendlela yokuba ungabandakanya ifoto yeprofayile, Ngale ndlela umsebenzisi ofuna ukungena kwiprofayile yakho angafumana ulwazi ngawe kwaye angakubona kumfanekiso.
Awunakutshintsha kuphela inkangeleko yomfanekiso wakho okanye ifoto ethile, kodwa kunye noyilo. Ngale ndlela, unokutshintsha eminye yemibala, kwabanye ebetha ngakumbi, okanye ukongeza ukuthungwa okunomdla, akufuneki ukuba ibe yi-inki ecaba.
Ngaphandle kwamathandabuzo, ezi ntlobo zeetemplates ziza luncedo ukukubonisa njengoko unjalo.
Kwizicelo ezinje ngeTwitch, ukusetyenziswa kweminikelo kukwavumelekile. Ukwenza oku, abaninzi abasebenzisi baqulunqa iipaneli ezahlukeneyo kunye neekhonkco ezikhokelela kumaphepha ewebhu apho unokunikela ngemali yemali kwinjongo ethile.
Kule nto, sifumana iitemplates apho sinokuzisebenzisa kwaye siziyile ngendlela esiyithandayo. Ngokuqhelekileyo zinee-icon ezifana nemaliNgokuxhomekeke apho umnikelo ukhoyo, bahlala bene icon enye okanye enye onokuthi uyiguqule xa ukhuphele itemplate.
Sukuphelelwa yiphaneli yakho yomnikelo kwaye ufumane ezinye zezi templates.
I-Twitch lelinye lala maqonga athe ngokuhamba kwexesha avela kwaye ekhula ngakumbi nangakumbi. Ayinikeli kuphela ithuba lokudlala kwi-intanethi okanye ukuncokola, kodwa unokuphinda ubonise olona lwazi lubalulekileyo kwiprofayile yakho ukuze abanye bangaphuthelwa ukuba ungubani na kunye nento oyenzayo.
Yonke imihla kukho izicelo ezininzi ezijoyina olu hlobo lwamakhonkco okanye iiphaneli zolwazi. Kuba akwenzeli nje ukufunda kube lula, kodwa inika ithuba lokukwazi ukunika yonke idatha eyimfuneko.
Ngaba uyafuna ukwenza ipaneli?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Iiphaneli zeTwitch
Uyenza njani itshathi yombutho kwiPower Point
Ungawufumana njani umzobo wegolide kwiPhotoshop